Beyoncé dia nampiseho tamim-pireharehana foana ny nonony, saingy taorian'ny nateraky ny zanany vavy, ny endriny dia very ny fahaverezany teo aloha. Fa ankehitriny dia voavaha ilay olana. Araka ny tatitra nataon'ny haino aman-jery tandrefana dia nanao fandidiana plastika ny diva.
The Beyonce modesty
Blue Avi dia niseho tamin'ny mpihira 34 taona, Beyonce ary ny vadiny vadiny 45 taona, Jay Zee tamin'ny taona 2012. Ilay mpilalao sarimihetsika dia nanala azy nandritra ny fotoana ela.
Taorian'izany, ny kintan'ny pop dia nanadino ilay decollete saro-kenatra, nandresy ny akanjon'akanjo nanarona ny tratra. Beyoncé dia nitsahatra tsy nahatsapa firaisana ara-nofo, nanomboka nikaroka izany noho izany, saingy tsy sahy nanamboatra plastika izy, hoy ilay mpitsidika.
Gossips dia milaza fa ny mpandihy fanahy dia tsy nandry teo ambanin'ny antsy mpitsabo. Nandresy lahatra azy i Jay Zeh ary nandao izy. Ny fifandraisana eo amin'ny mpivady dia very ny fitiavan-tenany taloha ary Beyoncé dia vonona ho an'ny be loatra, mba hiposahan'ny afo indray.
Beyonce dia manana tempoly manokana
20 ireo niharam-boina tamin'ny lamaody, izay fotoana tokony hamonjena, mandra-paha-tara loatra!
Zava-baovao 20 momba ny Disney Princess izay hanohina anao
Tsara sy mahafinaritra
Ny fahombiazana dia nahomby, ny hatsarana dia tsy vitan'ny nanaitra ny nono, fa nanampy ny laser ihany koa nanaisotra ireo marika mahatsiravina.
Ilay mpilalao dia azony antoka fa toa tsy mendrikendrehina izy ary maneho amim-pireharehana ny fanavaozana azy, ary misafidy akanjo matevina izay mampisongadina ny nonony.
Hamela vehivavy ve i James Bond? Bilaogera dia mandray marika amin'ny Gillian Anderson!
Tom Cruise dia nanambany an'i Vanessa Kirby
Vito Schnabel, modelin'ny sipa Heidi Klum, dia naneho hevitra momba ny oroka mahatsikaiky amin'ny vahiny
Nomen'i Ed Shiran ny gitara mba hanampiana mpankafy kely hanangona vola ho an'ny fitsaboana
Ny mpilalao sarimihetsika Katerina Graham dia namaly ireo rehetra niampanga azy tamin'ny fampiasana zava-mahadomelina
Jason Statham dia ho lasa ray
Ashley Olsen, taorian'ny nisarahany tamin'ny mpanana vola 58 taona, dia nahita ny mpampakatra tanora
Ny Pussycat Dolls dia niangona indray ary nitaky fitoriana am-panajana ny mpikambana taloha tao amin'ny vondrona
Te hahafantatra ny fomba fampiofanana an'i Megan Markle? Ilay mpanazatra fitaratra dia manambara ny tsiambaratelo!
Jamie Foxx dia manova an'i Katie Holmes
Ilay mpilalao sarimihetsika Chris Pratt dia nahatonga onjam-pahatezerana vetivety, nametraka lahatsoratra iray momba ny famonoana zanak'ondry iray
Randy Gerber mikasika ireo ankizy ao amin'ny efatra Clooney: "Nankasitrahan'izy ireo ny toetran'i Amal sy i George"
Fiafarana raharaham-barotra: Jessica Alba vonona hivarotra ny orinasa miaraka amin'ny fahabangana lehibe
Mark Zuckerberg no nanova ny fanilony ho an'ny zanany vavy
Inona no tokony hatao amin'ny golphins?
Ahoana ny fomba hanasana ny tennis ao an-trano - torohevitra tsotra ho an'ny kiraro fanatanjahan-tena
Angelina Jolie - vaovao farany momba ny fahasalamana
Ny soritr'aretin'ny fahaketrahana amin'ny fararano
Salady miaraka amin'ny ginger
Ahoana ny fomba hanesorana alika hikirakira zavatra?
Ireo mpivady vao roa ireo indray no nanazava ny Internet, ary niresaka momba azy ireo indray androany
Selenium ho an'ny vatana
Moto knee pataloha ho an'ny jeans
Ahoana ny fomba fanaovana mofomamy?
Tavy matevina ao amin'ny aquarium
Famolavolana efitra fandraisam-bahiny ao amin'ny trano manokana
Famaranana amin'ny siramamy mafana
Ny sakafo Koreana ho an'ny fahavoazan'ny fahavoazana - ny safidy tsara indrindra
Trano fidiovana ho an'ny tovovavy iray
Palette ao anaty
Sakafo ho an'ny lany tambatra amin'ny programa "Fahasalamana" miaraka amin'i Malysheva
Ahoana no fomba hahatonga ny olona hieritreritra anao?